Ny Buriram any Thailandy dia manao heloka bevava amin'ny fandavana ny vaksinin'ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny Buriram any Thailandy dia manao heloka bevava amin'ny fandavana ny fanaovana vaksinin'ny COVID-19
Governoran'i Buriram, Thatchakorn Hatthatthayakun
Ny governoran'ny faritany tsirairay any Thailand dia manana fahefana hampiditra ny fepetra fisorohana sy fameperana COVID-19 araka izay heverin'izy ireo fa mety.
Buriram dia nandidy ny olona ao anaty vondrona atahorana mafy handray ny vaksinin'ny COVID-19 na hiatrika fotoana tsara sy am-ponja
Ny fandavana tsy hanao fanadihadiana dia mety handoa onitra 10,000 baht Thai (319 $) na higadra 30 andro
Ny fandavana fanaovana vaksinina dia mety hitarika any an-tranomaizina mandritry ny roa taona sy onitra 40 arivo baht (1,280 $)
Buriram no lasa faritany voalohany ao Thailand hanamelohana ny fandavana hanao vaksinina manohitra ny COVID-19.
Ny manampahefana ao amin'ny faritanin'i Buriram dia nandidy ny olona ao anaty vondrona atahorana mafy handray vaksinin'ny coronavirus na hiatrika fotoana tsara sy am-ponja.
Ny didim-panjakana ofisialy nandà ny hanaovana vaksiny hanaovana heloka bevava dia nosoniavin'ny governoran'i Buriram ny alakamisy alina.
Ilay antontan-taratasy, nosoniavin'ny governoran'i Buriram, Thatchakorn Hatthatthayakun, dia nandidy ny mponina rehetra ao amin'ny faritany mihoatra ny 18 taona mba hamita ny fanadihadiana mba hanombanana ny mety ho voan'ny virus coronavirus. Ny fanontaniana dia efa natolotra tamin'ny mpitsabo hatramin'ny 31 Mey.
"Ireo olona izay, araka ny valin'ny valin'ny fangatahana, dia raisin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ho voan'ny virus coronavirus, ny mpiasan'ny fahasalamana dia manan-jo hanome vaksiny tsy maintsy atao manoloana ny COVID-19, ary aorian'izay dia hotakiana ny olona toy izany ny teboka fanaovana vaksiny amin'ny andro sy ora tendren'ny mpiasan'ny fahasalamana ary mahazo vaksiny ”, hoy ny didin'ny governora.
Ny fandavana tsy hanao fanadihadiana dia mety handoa onitra 10,000 baht Thai (319 $) na higadra 30 andro. Ny fandavana fanaovana vaksinina, rehefa omen'ny mpiasan'ny fahasalamana, dia handoa onitra 20 640 baht Thai ($ XNUMX).
Ireo izay mandà ny fanaovana vaksiny voatendry tsy maintsy atao dia azo enjehin'ny lalàna ihany koa amin'ny fanoherana ny fihanaky ny areti-mifindra mampidi-doza, izay manome hatramin'ny roa taona an-tranomaizina ary mandoa onitra 40 baht (1,280 $).
Ny governora isam-paritany Thailand dia manana fahefana hampiditra ny fepetra fisorohana sy fameperana COVID-19 araka izay heverin'izy ireo fa mety, hoy ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), natsangana teo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana. didim-pitsarana maika